Emirate-ka oo xabsi cusub ka dhisaaya Magaalada Kismaayo – STAR FM SOMALIA
Emirate-ka oo xabsi cusub ka dhisaaya Magaalada Kismaayo
Emirate-ka Carabta, ayaa waxaa uu ballanqaaday in mashaariic ballaaran oo horumarineed ay xilligan ka samaynayaan Magaalada Kismaayo Ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose.
Wefdi uu horkacaayay Safiirka Emirate-ka Carabta u fadhiya Somaliya, Mohammed Ahmed Othman Al Hammadi oo Talaadadii gaaray Magaalada Kismaayo, ayaa waxay kula kulmeen Madaxweynaha Maamulka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) iyo masuuliyiin kale.
Labada dhinac, ayaa waxay ka wada hadleen mashaariic horumarineed oo Emirate-ku uu xilligan doonaayo inuu ka fuliyo Magaalada Kismaayo, taasoo ay soo dhaweeyeen Madaxda Jubbaland.
Gaba gabadii kulankaasi shir jaraa’id oo ay wada qabteen Madaxweynaha Jubbaland iyo Safiirka, ayay ku sheegeen in mashaariicdan uu qayb ka yahay hirgelinta xabsi cusub oo laga dhisaayo Magaaladaasi.
Madaxweynaha Jubbaland, ayaa sheegay in wefdiga Safiirka ay Magaalada Kismaayo u yimaadeen, sidii ay kaga fulin lahaayen mashaariic horumarineed, sida iskuulo, isbitaalo, Xarun Dowladda Hoose ay leedahay iyo xabsi.
Safiirka, ayaa yiri “Waxaan Magaalada Kismaayo u nimid sidii looga dhabbeen lahaa ballanqaadyo aan horey halkaan uga jeediyay, oo ahaa in laga fulin doono mashaariic horumarineed, sida inaan ka dhisno xabsi, iskuulo, isbitaalo iyo Xarunta Dowladda Hoose.”
Safiirka, ayaa waxaa uu hoosta ka xariiqay mashaariicdan inay qayb ka tahay mashaariicda horumarineed ee Emirate-ka uu ka wado dalka Somaliya, isla-markaana ay sii wadi doonaan taageeradooda ku aadan Somaliya.
C/salaam Hadliye Cumar, ayaa ka hadlay sababta keentay inay la saftaan Dowladda Boqortooyada Sacuudi Carabiya,
Madaxweynaha Jubbaland oo maanta ku wajahan magaalada Cadaado